Muudamuu Doktar Abiyyii hordofee onnachuu DhDUO
Tibbana, ayyaanaa hundeeffaamaa Dhaabbata Dimokiraatawaa Ummataa Oromoo (DhDUO) waggaa 28fan kallattiile gara garaatiin kabajameera. Sirnoota garagaraa ayyaanichi ittiin ayyaaneffamaa ture keessaas mariin paanaalii tokko. Jimaata darbe hojjetoonni Waajjira Pirezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa marii paanaaliitiin kabajataniiru.
Mirri gammachuu galmichaa guuteera. Miirri kunis dura taa'aa ADWUI ta'uun kan filamaniifi Ministira Muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahimad DhDUO keessa waan ba'aniif ta'uu hinoolle. Bu'aa qabsoo dhaabichaa kan ta'ee ittigafatamnii biyyaa dhaabichatti kennames kutannoo miseensotaa biratti uumeera.
Mata duree “Toora dhaabaafi tumsa ummata keenyaatiin rakkoon nuti hinhiikne, injifannoon nuti hingalmeessifne hinjiraatu” jedhuun ayyaanni kabajame kanarratti qabsoo duraanii, qormaataa keessa jiramuufi kallattii fuulduraarratti Hogganaan Biiroo Bulchiinsa Maanijimantii Lafa Baadiyyaa Oromiyaa Obbo Geetuu Wayyeessaa barreeffamaa gabaaba mariif dhiyeessan kutatummaa dhaabichaa calaqqisiseera.
Obbo Geetuun ibsasaanii, keessatti kanaan boodaa duubatti deebi'uun akka hinjirre hubachiisan. Innis DhDUOn kanaan duraa gaaffii ummataa deebisuu hindanda'u jedhamee kallattii garagaraatiin qeeqamaa ture. Amma garuu, tarkaanfileen jajjabeessoon wayitaa fudhatamaa jiranitti hawaasni cinasaani dhaabbachuu eegaleera. Kunimmoo gaaffilee hawaasaa deebisuudhaaf adeemsii eegalame bu'aa gaarii argamsiisaa jira. Kan kanaan duraa caalaa sabaafi sablammootaa ofitti qabuudhaan, tuffiifi ilaalchi bu'aa hinbuufne dhaabicharra ture akka cabuuf kutatummaafi xiiqiidhaan hojjechuun akka irraa eegamuudha kan ibsan.
Qabsoon Oromoo seenaa qabsoo Itoophiyaa har'aa keessatti gumaacha olaanaa qaba. Kunis gama hundaanuu qabsoo ijaarsa biyyattii keessatti, qoodi Oromoon bahachaa ture laayyootti kan ilaalamu miti. Kanaaf, seenaa kaleessaa keessatti akkuma gahee olaanaa bahachaa turre, har'as ittigaafatama kennameefitti dhimma ba'uudhaan jijjiirma biyyattiif seenaa hojjechuu qabna jedhan.
Durataa'aa DhDUO kan ta'aniifi yeroo amma Durataa'aa ADWUIfi Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmad filatamuun, caalaa akka isaan onnachiisuu qabu akeekkachiisan. Har'a, DhDUOn qormaataafi daandii qaxxaamuraarraa akka jiruudha Obbo Geetuun kan dubbatan. Gama hawaas-dinagdeefi siyaasaatiin injifannoowwan galmaa'an kan hinhaalamne ta'ulle, gaaffileen Oromoo hedduun deebii hinarganne. Ilaalchi olaantummaafi sassaabdummaan kiraa ammayyuu hincabne waan ta'eef, ciminaan hojjechuu barbaachisa jedhan.
DhDUOn, ga'umsa biyya ogganuu qaba jedhamee wayita ittigaafatamni itti kenname deggarsa kan taasise sabaafi sablammoota. Kanaaf akka kanaan duraa dhaabichi hamatamuu akka hinqabne, waan xiqqootti quufamee waan xiqqootti ammoo duuba deebi'uu hinjiru. Boqonnaa murteessaarraa jirama waan ta'eefis kan dhaabichi ittiin madaalamu hojiisaafi ga'umsaasaan ta'uu qaba. Kanaaf falli hinjiiru; duubattis hindeebi'amu jechuun hamileefi onnannaadhaan akka socho'an dubbatan.
Miseensa Koree Raawwachiiftuu Hojii DhDUO Obbo Fiqaaduu Tasammaa, gamasaaniin waltajjii kanarratti akka jedhanitti, yeroo fedhiin misoomaafi dimokiraasii dagaagee keessatti dhaabniifi mootummaan gaaffii ummataaf deebii kennuun walqabatee taatee baay'een uumameera. Gaaffiin haqa qabeessuummaafi fayyadamuummaa Oromoo bal'inaan ajandaa ta'ee kan as ga'eefi qabsoon bal'aan geggeeffamaa kan jiruudha.
Gaaffii Oromoo guutummaan deebisuuf yeroo kamiyyuu caalaa dhaabichi qabsoo jalqabeefi qabsoo kana hordofees ittigaaftamni biyya bulchuu kan kennameef ta'uudha kan eeran. Carraa kanaan walqabatee miira ittigafatamummaa qabuun bu'a qabeessa ta'uuf ergamaa akka biyyatti kenname milkaa'inaafi injifannoon keessa darbuuf hunduu tokkummaan dhaabbachuu qaba jedhan. Ittigaafatamni kun kan kennamee nama tokkoo qofaaf utuu hintaanee miseensa guutuufi Oromoo maraafidha. Biyyattii geggeessuuf yommuu dhaabbannus ergamni dabalaataa akka irraa eegamu dubbatan.
Duudhaa sirni Gadaa nu barsiiseen sabaafi sablammoota hundaa jaalalaafi tokkummaadhaan qabannee kan ittiin deemnudha. Kanaaf, Oromummaan guddaa akka ta'ee hojjennee argisiisuu qabnas jedhan..
Walumaagalatti kan darberraa dhaabbannee kan fuulduraa yaaduun murteessadha. Kan kaleessa babbadee, sassaabdumaa kiraatiin walmakateefi laaqame qulqulleessaa, tarkaanfii cimaa irratti fudhachaa, fuuldurattii kan uumamuuf ammoo tooftaafi tarsiimoon furaa adeemuun barbaachisaadha. Waan ta'eef, DhDUOn ittigaafatamumma irra ka'ameef akkuma onnate ga'umsaan ba'achuuf hunduu tumsuu qaba.
Torban kana/This_Week 4333
Guyyaa mara/All_Days 1641928